Sidee loo ogaadaa meesha ugu dambeysa ee iPhone-kaaga bilaa batari | Wararka IPhone
Suurtagalnimada hel mobilkayaga Adeegsiga Raadinta iPhone-kayga ayaa naga saari kara wax ka badan hal dhibaato. Haddii ay dhacdo xatooyo, lumis ama in la ogaado booska qalab kale, helitaanka meeshiisa ayaa naga caawin doonta inaan dib u soo ceshanno oo aan ogaano meesha ugu dhow.
Si loo ogaado meesha saxda ah ee qalabka macruufka ah, waxaa lagama maarmaan ah inuu leeyahay batteri awood u leh inuu u diro booska waqtiga dhabta ah. Sida iska cad, haddii batterigu kaa sii yaraanayo, adoo adeegsanaya Raadinta My iPhone waxay sii xumeyneysaa xaaladda xitaa in ka sii badan, sidaa darteed macruufka wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in la diro meesha ugu dambeysa ee qalabka si had iyo jeer loo helo xitaa iyadoo terminaalku horey ujiray.
1 Firfircoon dirista meeshii ugu dambaysay ee iPhone
2 Sida loo arko booska ugu dambeeya ee iPhone-ka
2.1 Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Apple Search
2.2 Wadada iCloud.com
3 Xaddidnaanta astaantan
4 Miyaad arki kartaa meesha ugu dambeysa ee uu ku shaqeynayo iPhone-ka ku shaqeeya?
5 Maheli karaa iPhone-kayga xitaa marka uu dansan yahay? Iyada oo leh iOS 13 haddii ay suurogal tahay
5.1 Sidee "Find offline" u shaqaysaa
Firfircoon dirista meeshii ugu dambaysay ee iPhone
Dhalad ahaan, mar kasta oo aan iibsanno iPhone cusub ama aan soo celinno qalabkeenna si aan ugu rakibno nooc cusub oo iOS ah, qalabkeenna shid Raadi My iPhone, hawl aan ka joojin karno wakhti kasta sida ku xusan baahiyaheena.
Si kastaba ha noqotee, shaqada noo ogolaaneysa inaan ogaanno meesha uu ku yaal iPhone-kayga markii uu ka baxayo batteriga aan shuruud looga dhigin inkasta oo ay ku wada jiraan isla qaybta noo ogolaanaysa inaan helno wakhti kasta.
Haddii aan rabno iPhone-keena inuu Gudbi goobtaada kahor inta uusan batterigaagu dhammaan Waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda:
Marka hore, waxaan aadeynaa xulashooyinka qaabeynta qaabeynta ee loo maro goobaha.
Gudaha Settings, guji koontadayada 'iCloud', ayaa ka muuqda dusha sare ee liiska.
Kadibna waxaan raadineynaa ikhtiyaarka Raadi iPhone-kayga waxaana shidnay badhanka Dir meesha ugu dambeysay.
Sida loo arko booska ugu dambeeya ee iPhone-ka
Si loo helo meesha ay hadda ku yaalliin qalabkeenna iyo kan ugu dambeeya ee la diiwaangeliyey ka hor inta aanu batterigu dhammaan, haddii aan hawlgelinnay hawshan, oo lagu sharxay qaybtii hore, waxaan haysanaa laba ikhtiyaar oo aan ku qaadan karno.
Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Apple Search
Codsiga Raadinta ee laga heli karo App Store-ka ayaa noo oggolaanaya, marka aan soo galno xogta koontadayada iCloud ogow meesha qalabkeenu yaalo waqtigaas meesha uu ku jiro ama ogyahay meesha ugu dambeysa haddii uu baterigu ka dhammaaday.
Haddii qalabku uusan helin Raadi iPhone-kayga oo shaqeynaya, kaliya magaca qalabka ayaa lagu soo bandhigi doonaa qoraalka Xidhiidh la'aan. Hadday batteri la’aan tahay, na tusaya qoraalka Goobta ugu dambeysa ku xigta magaca qalabka.
Haddii qalabkaaga uu maamulo macruufka 13, looma baahna in la soo dejiyo barnaamijka Raadi My iPhoneMaaddaama Apple ay ku dartay asal ahaan dhammaan aaladaha la jaan qaadi kara nooca saddex iyo tobnaad ee iOS. Halkii loogu yeeri lahaa Raadi My iPhone waxaa loo yaqaan Raadin
Haddii aynaan haysan aalad kale oo Apple ah oo gacanta ku jirta, haddii ay tahay iPhone, iPad ama iPod taabasho, Apple wuxuu ka dhigayaa websaydhka iCloud.com inala heli karo. Iyadoo loo marayo degelkan, waan awoodnaa marin u hel dhammaan meesha qalabkeenna adeegsiga hawsha Raadi.
Shaqadani way ina tusi doontaa dhammaan aaladaha la xiriira koontadayada oo ay weheliso goobtaada hadda la joogo ama ugu dambeysey ee la duubay kahor inta uusan batterigu kaa dhammaan ama uusan demin aalad la helay / la xaday
Si aad ugu raaxeysatid shaqadan macruufka ah ee cajiibka ah ee noo ogolaanaya inaan ogaanno meesha qalabkeenu ku yaal haddii aan lumino raadkeeda, waxaa jira hal shuruud oo keliya: leeyihiin Raadi My iPhone karti qalabka.
Haddii aynaan hawlgalin shaqadan, aan macquul aheyn in lala socdo meesha uu ku yaal terminaalkeenu, maadaama oo aan meel fog laga hawlgelin karin, xaddidaadda ay tahay in la helo si gacan looga siiyo dadka isticmaala kuwa aan caddayn.
Miyaad arki kartaa meesha ugu dambeysa ee uu ku shaqeynayo iPhone-ka ku shaqeeya?
Haddii taleefannadeena iPhone-ka ay ka dhammaadeen baytarigooda ama gacanta lagu damiyay, adeegga goobta Apple wuxuu u tixgeliyaa si isku mid ah, markaa haddii ay suurogal tahay ogow meesha uu ku yaalo Terminalka inta uusan dansan. Laakiin dabcan, waxay kuxirantahay halka aan ka waynay raadkiisa.
Haddii aan uga tagnay illownay makhaayad ama dukaan, waxay u badan tahay in maareeyayaashu ay damiyaan iyagoo sugaya milkiilaha saxda ah inuu soo laabto, tan iyo markii la xanibay cid aan inaga ahayn ma heli karto.
Maheli karaa iPhone-kayga xitaa marka uu dansan yahay? Iyada oo leh iOS 13 haddii ay suurogal tahay
Dhaqdhaqaaqa "Raadi offline" waxaa kaliya laga heli karaa qalabka ay maamusho macruufka 13 ama ka sareeya
Ugu horreyntii, waa inaan tixgelinno nooca nidaamka hawlgalka ee qalabkeennu maareynayo si loo ogaado haddii aan ka faa'iideysan karno doorashadan. IOS 13 kuma habboona iPhone 5s ama iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, sidaa darteed haddii aad mid ka mid ah aaladahaas leedahay, ma awoodi doontid inaad isticmaasho.
Markii la sii daayay macruufka 13, Apple waxay soo saartay muuqaal cusub oo loo yaqaan "Find My Offline", kaas oo Waxay noo ogolaaneysaa inaan helno markasta waa meesha uu ku yaalo qalabkeenu xitaa haduu internet la’aan yahay ama uu dansan yahay gebi ahaanba, maadaama aysan ku xirneyn ishaarada GPS ama saddex geesoodka ee shabakadaha Wi-Fi ama shabakadaha mobilada, laakiin waxay ku saleysan tahay ikhtiyaarka hab maamuuska Bluetooth Low Energy (BLE).
Si looga faa'iideysto tiknoolajiyadan, tan iyo markii lagu heli jiray qalab yar yar oo loo yaqaan 'Tiles' oo suuqa ku jiray in ka badan 5 sano, waa lagama maarmaan in la helo ugu yaraan laba qalab oo leh iOS 13, ama iPhone ama iPad oo leh iOS 13 iyo Mac ay maamusho macOS Catalina, ma awoodi doonno inaan helno qalabkeenna haddii aan haysanno aaladda Apple oo keliya.
Sidee "Find offline" u shaqaysaa
Marka aan isku xirno labada qalab, abuuro furayaal gaar ah oo ay wadaagaan labada qalab iyada oo loo marayo isgaarsiinta sirta ah. Marka xigta, fure dadweyne ayaa la abuuray, oo sidoo kale loo yaqaan beacon, oo ah aqoonsiga aaladahaaga, nal loo gudbiyo iyada oo loo marayo bluetooth-ga qalabka kale ee iPhone, iPad ama Mac ee deegaankayaga ah.
Haddii aan helno nasiib-darrooyinka luminta ama xatooyada iPhone-ka, dhammaan iPhones-ka la mariyo qalabkaaga waxay helayaan signalada waxayna na siinayaan goobta aaladda. Intii lagu gudajiray hawshan oo dhan, Apple wax marin ah uma helin wakhti kasta goobta aaladda, marka lagu daro, adeegsadaha haysta caawiyey si aad u hesho ma ogaan doontid midkoodna.
Intii lagu gudajiray hawshan qaabeynta iyo howlgalka, isticmaalaha maahan inuu wax uun sameeyo. Haddii aan waayno qalabkeenna oo aan dooneyno inaan ogaano halka uu ku yaal, kaliya waa inaan raacnaa tallaabooyinka aan kor ku soo xusnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo ogaado meesha ugu dambeysa ee iPhone-kaaga, xitaa haddii ay ka dhammaato batteriga
Subax wanaagsan, waad ku mahadsan tahay dhammaan qoraaladaada, waa kuwo aad u xiiso badan, laakiin kan ugu dambeeya, aniga, oo haysta iPhone 4, ma geli karo Raadi iPhone-keyga oo dooro 'U dir meeshii ugu dambeysay'. Si kale ayaan u samayn karaa mase kani kaliya qalabka leh iOs ka sarreeya 7.1.2?
Ujawaab Victor Visier
Hambalyo Victor, miyaanad heli karin raadinta iPhone-kayga? Ma leedahay iCloud firfircoonaan?
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga oo kale sidii Victor. Haddiise aaladdu go'antahay, adiguna ma heli kartid, sax?
Jawaab ku bixi Marga Carrasco Esparza
Maya, haddii ay dansan tahay waxaan awoodi doonnaa oo keliya inaan ogaanno meesha ugu dambeysa laakiin haddii ay isbeddesho, ma awoodi doonno inaan ogaanno booska cusub illaa iyo inta laga daarayo oo lagu xirayo shabakadda, ama 3G / 4G ama WiFi.
Waxay ila tahay aniga in ubucda markasta ay muujinayso meesha ugu dambaysa ilaa inta ay kuxirantahay shabakada wi-fi
Jawaab Renato Fernandez S
Waad salaaman tihiin habeen wanaagsan, waxaan rajaynayaa inaad ii jawaabi kartaan, maanta waxaan dhibbane u ahaa dhulka hoostiisa ee Venezuela, waxaana la xaday taleefankayga gacanta, waxaan isku dayayaa inaan taleefankayga gacanta ku dhex mariyo Find my iPhone, laakiin waxay igu tuuraysaa farriinta «maya isku xirnaanta », mana arko meesha ugu dambaysa ee la heli karo, ma ogtahay waxa ay noqon karto? Aad baad ugu mahadsan tahay horay
Jawaab Fabiana Lemos
Habkaani waxaa laga heli karaa oo keliya sida of macruufka 8
Jawaab Javier Martínez
Shaqadan awgeed waxaan awoodey inaan dib u helo taleefankayga gacanta laba saac kadib markii aan waayey 🙂
wuxuu cunaa batteri badan?
Marka laga hadlayo batteriga, kiiskeyga marwalba waxaan heystaa goobta oo firfircoon, faa iidada mana ahan mala awaal in aan haysto iPhone 6 oo lagu daray batteriguna waqti dheer ayuu ku qaadanayaa adeegsiga degdega ah waxaan ku noqdaa guriga kadib markaan la shaqeeyo 40% maahan markii lahaa 5s duhurkii Waxaan lahaa lacag mar kale
Waxaa iga lumay taleefankayga iPhone 4, waxayna ku xireen internetka oo ay damiyeen, waxay ii sheegeen inay daareen laakiin ma garan karo goobta, ma jirtaa qaab lagu ogaado ??
Haddii arjiga aan la soo dejisan, ma shaqeynayo?
Sidee ku saabsan, waxaan lumiyay iPhone 4s, waxay leedahay koontadayda iCloud, laakiin ma lahayn wax xannibaad ah ama wax ah, waxaan ula jeedaa waa la isticmaali karaa, waxa aan rabo inaan ogaado, waa in haddii qofkii helay, uu joojiyo goobta, aniga awoodi maayo in la ogaado halka ay kooxdu tahay? maxaa yeelay way ii muuqataa aniga oo aan isku xirnayn
Ku jawaab qashinka
Waxaan lumiyay iphone 4skeyga waxaana dirtay meeshii iigu dambeysay ee ladiray, kaliya ma aqaano sida ay ushaqeyso. Ma jirtaa hab lagu ogaado ama haddii uu dansan yahay, ma sheegi kartid? fadlan caawi !!!!!!
Saaxiib wanaagsan, waxaan lumiyay taleefankayga iPhone-ka wuxuuna ii soo diray goobta markii ay taleefanka shidanaayeen laakiin waxaan ka turjumay oo keliya 24 saacadood oo markaan arkay warqadda, 24 saac ayaa horay loo dhaafay, ma jirtaa waddo aan mar kale ku arko goobtaas?
Ku jawaab mariuxy
Waxaan lumiyay iphone 6-keedii waxayna leedahay codsi firfircoon oo lagu raadinayo iphone-kayga laakiin ma i tuso meesha ugu dambeysa kaliya waxay ii sheegaysaa inay ka go'antahay shabakada
Waxaan lumiyay iPhone 6-kayga si ku meelgaar ah guryaheyga, waxaan u isticmaalaa wax yar markaan tago si aan u soo qaado (25 ama 30 maalmood ka dib) ma ku deeqo tan. Ipad-ka oo raadiya iPhone-kayga, waa wuxuu ii sheegayaa inay qadka ka maqan tahay, Maxaan sameeyaa si aan u soo ceshado, maaddaama aan labada aqal rogay oo aan u muuqan, waa inuu ku dhammaaday baytarigiisii.
Sideen ku heli karaa iPhone-kayga hadii iCloud uusan shaqeynin, fadlan ii sheeg
Ujawaab Victor Garcia
Ma awoodid, raalli ahaw
Waxaan lumiyay iPhone-kayga dhowr maalmood ka hor maanta, batteriga mar dambe lacag kama haysto, haddii aan xusuusto koontadayda iCloud oo aan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha ugu dambaysa ee ay ku taal, laakiin faahfaahintu waa inaanan xusuusan haddii aan ikhtiyaar u lahaa dir goobtii ugu dambeysay ee firfircoon ... waa suurtagal in la ogaado.
IPhone-kayga waa la xaday, laakiin markaan rabo inaan tirtiro, waxay i weydiineysaa lambarka aqoonsiga oo, sida ku xusan farriinta, waxay ii sheegeysaa inaan ku doorto shaashadda iPhone-kayga ama aaladaha lagu kalsoon yahay, sideen ku helaa lambarkan ? midka leh xaqiijinta laba qodob
Ku jawaab julian parra
Waad salaaman tahay, shalay ayaan lumiyay taleefanka gacanta ee iPhone-ka waxaanan galiyay arjiga «find my iphone» wayna muuqataa iyadoo aan laxiriirin waana wacayaa wayna damineysaa. Maxaan sameyn karaa?
Waxay xadeen iphone 6skeyga, 4 maalmood ka dib ayeey shiteen habeenkii, subaxnimadii waxaan galay ogeysiinta ah inaan helay icloud, laakiin aaladdu mar dambe uma muuqato. Miyey tirtireen? Suurtagal ma tahay in la helo meeshii ugu dambaysay, ee ay farriintu u muuqatay?
Jawaab Ana Sierra
hello waxaan lumiyay iphone 6 ma xasuusto erayga sirta ah
Ku jawaab johannna osorio
Kusamee iPhone-kaaga adoo adeegsanaya AnyTrans
Jiilka 7aad ee iPod taabashada ama Nintendo Switch inuu u ciyaaro Fortnite